Azo atao izao ny mampiasa ny iPad mandritra ny diantsika fiaramanidina | Vaovao IPhone
Ireo fitaovana elektronika dia teo amin'ny sisin'ny fiarovana hatrany anaty fiaramanidina. Ary io dia nisy foana ny tahotra ny mety ho fanelingelenana mety haterak'ireo fitaovana ireo amin'ny fitaovana fitetezana rehetra an'ny fiaramanidina. Ny zava-misy izay naseho fa tsy marina, ary Misy aza ny fiaramanidina izay anolorana ny fifandraisana Wi-Fi ohatra.
Any Espana, toy ny ao amin'ny Vondrona eropeana iray manontolo, voarara tanteraka ny fampiasana fitaovana elektronika mandritra ny fiaingana sy ny fipetrahana ny fiaramanidina (na ny fampiasana azy ireo miaraka amin'ny 'Airplane Mode' aza no avela). Saingy toa tsy misy fiatraikany amin'ireo toe-javatra sidina ireo intsony ireo fitaovana ireo Azontsika atao ny mampiasa ny an'ny iPad ao anaty fiaramanidina tsy misy fameperana (mampihetsika ny 'Airplane Mode').
Omaly dia navoaka tao amin'ny Gazetim-panjakana ofisialy ny fanamafisana ny fampifanarahana ny lalàna momba ny fiarovana ny sidina espaniola amin'ny rafitra mpanao lalàna eropeana.. Midika izany fa herinandro vitsy lasa izay ny Vondron Eropeana dia nanome jiro maitso hanafoanana io fandrarana io, ary ankehitriny dia toy izany koa no atao any Espana.
Mazava ho azy fa tsy maintsy ampiasaintsika ny 'Airplane Mode' ary Ny solosaina finday dia tsy ho tafiditra ao amin'io permissiveness io fampiasana amin'ny fiaramanidina (noho ny refy amin'ireo). Ny telefaona, takelaka, mpitendry mozika, sy ny toy izany dia azo ampiasaina mandritra ny sidina miaraka amin'ity 'Airplane Mode' ity.
Na izany aza, na dia mamela ny fampiasana ireo fitaovana ireo aza ny State Aviation Security Agency (AESA) mandritra ny dingana rehetra amin'ny sidina, dia nohazavaina fa ny fanapaha-kevitra farany fampiasana dia ny kaompaniam-pitaterana no manapa-kevitra noho izany dia mety hahita fahagagana isika amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo.
Ary ianao, Mihevitra ve ianao fa ny iPad na ny mpilalao Mp3 iray dia afaka manimba ny fiarovana ny fiaramanidina?
Fanazavana fanampiny - Ampandehano ny Wifi sy ny Bluetooth amin'ny maody fiaramanidina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Azo atao izao ny mampiasa ny iPad mandritra ny diantsika fiaramanidina
TinyBar, ahenao ny haben'ny fampandrenesana amin'ity tweak lehibe ity (Cydia)
3G Unrestrictor 5 dia novaina ho iOS 7 ho an'ny 3G (Cydia) tsy voafetra